အမေးအဖြေများ -, Ltd. Austar Lighting ကုမ္ပဏီ
ဖုန်းနံပါတ်: 86 574 62988288
E-mail ကို: info@austarlux.com
LED ကို Bollard Lighting
LED ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Lighting
ကျနော်တို့လုပ်အားခအပေါ် 12 နာရီအတွင်းသင် reply ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ဆီမီးစက်ရုံနှင့်ဆီမီး post ကိုစက်ရုံရှိသည်။ ကျနော်တို့သွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်ခွင့်ရှိသည်နှင့်အကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်စျေးကွက်။
ကျနော်တို့အဓိကအားဖြင့်ပြင်ပတွင် LED လမ်းပေါ်အလင်းဥယျာဉ်ကိုဆီမီးခွက်, စက်ရုံအလင်း, မီးခွက်သည် post ကို, မြို့ရိုးကိုအလင်းထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အလင်းတိုင်ဥယျာဉ်တော်။
သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏ applications များကဘာတွေလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်လမ်းများ, တံတားများ, ပန်းခြံများ, စက်ရုံအလုပ်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ရုံ wharves, စတာတွေအတွက်အသုံးပြုကြသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ 10000 ၏ဧရိယာကိုဖုံး ㎡ 1000T, 700T နှင့်တကွ, နှင့် 300T စက်တွေ, အပြည့်အဝအလိုအလျှောက်မှုန်ရေမွှားလိုင်း,3စည်းဝေးပွဲကိုလိုင်းများနှင့်2LED အိုမင်းလိုင်းများ ချ. သေဆုံးလျက်ရှိသည်။ ဆီမီးခွက်နှင့်ဆီမီးခွက်ဘလော့ခ်ပို့စ်ရဲ့နှစ်ပတ်လည် output ကို 150,000 အစုံရောက်ရှိ။
ကျနော်တို့ ISO9000-14001 လက်မှတ်ရှိသည်။ ကျနော်တို့တိုင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်ချောထုတ်ကုန်များအတွက်ကျနော်တို့ကို 100% စစ်ဆေးရေးယူပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်သည်။
ကျနော်တို့စသည်တို့ကိုရောင်စဉ် Analyzer, darkroom ရေစိုခံစမ်းသပ်ခြင်းတူရိယာ, ထိတ်လန့် tester, သက်ရောက်မှု tester မြင့်မား / အနိမ့်အပူချိန် tester အပါအဝင်စစ်ဆေးခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများ, advanced ပါပြီ
ကျနော်တို့ 10 ပညာရှင်များနှင့်5အင်ဂျင်နီယာများအပါအဝင် 100 ခန့်န်ထမ်း, ရှိသည်။
ကိုးကားတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ FOB, CIF, ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးသို့မဟုတ်အခြားသူများကဲ့သို့သင်တို့နှင့်အတူရှိသည့်ငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။
အသုတ်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကျနော်တို့ B / L ၏မိတ္တူကိုဆန့်ကျင် 30% သိုက်, လက်ကျန်ငွေလက်ခံပါ။
T / T အဓိကငွေပေးချေမှုဖြစ်ပါသည်, နဲ့ L / C ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာလက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်တို့လေ့ကျနော်တို့ Ningbo ဆိပ်ကမ်းနှင့်နီးစပ်သော Ningbo အတွက်ကြောင့်, ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်, ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုပါ။ သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်အရေးပေါ်လျှင်၏သင်တန်း, ငါတို့သည်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုသုံးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အဓိကအားဖြင့်ဒါပေါ်မရေိက, ဂျာမနီ, ဂျပန်, စပိန်, အီတလီ, အင်္ဂလန်, ကိုရီးယား, သြစတြေးလျ, ကနေဒါနှင့်တင်ပို့နေကြသည်။
သင် luminaire ဒီဇိုင်းကိုအဘယ်မှာရပါသလဲ?
ဘယ်လောက်မြန်သငျသညျသစ်ကို luminaire ဒီဇိုင်းသလဲ?
ကျနော်တို့တစ်လအသစ်တဦးတည်း luminaire ဒီဇိုင်းနှင့်စေနိုင်သည်။
အဘယ်အရာကို '' သင့်ရဲ့စက်ရုံအနီးရှိသင့်ရဲ့ဆိပ်ကမ်းနှင့်လေဆိပ်?
Ningbo သို့မဟုတ်ရှန်ဟိုင်းပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းတခု, Ningbo သို့မဟုတ် Hangzhou လေဆိပ်။
Adress: Yeao အရှေ့လမ်း 92, Lianghui Ind'l ပန်းခြံ, Xingshu, Yuyao, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ် 315400